We.com.mm - Park Hyung Sik ရဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲများစုစည်းမှု
Park Hyung Sik ရဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲများစုစည်းမှု
Park Hyung Sik ကိုချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ သူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေအတွက် Park Hyung Sik ပါဝင်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားလေးတွေကို ပြန်လည်ကြည့်ရှုလို့ရအောင် သူ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲလေးတွေကို စုစည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ Park Hyung Sik ကို ပရိသတ်တွေအရမ်းကြွေသွားကြတဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါပဲ။ တော်တော်များများလည်း ဒီဇာတ်ကားလေးကို ကြည့်ဖူးပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ဒီဇာတ်ကားလေးက အပိုင်း (၁၆) ပိုင်း ရှိပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ Park Hyung Sik ရဲ့ နန်းတွင်းကားလေးတစ်ကားပါ။ ဒီဇာတ်ကားမှာတော့ အပိုင်း (၂၀ + ၄) ပိုင်း ပါဝင်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားလေးထဲမှာတော့ Park Hyung-sik နဲ့အတူ Uee, Sung Joon နဲ့ Lim Ji-yeon တို့က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ ဒီကားလေးကလည်း အပိုင်း(၁၆) ပိုင်းပါဝင်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေးပါပဲ။
ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ (၂၀၁၄ - ၂၀၁၅) မှာထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ family, romance, drama ဇာတ်လမ်းလေးပါ။ ဒီဇာတ်လမ်းလေးက အပိုင်း (၅၃) ပိုင်း ပါဝင်တဲ့ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲလေးပါ။
ဒီဇာတ်ကားကတော့ အားလုံးပဲကြည့်ပြီးသားဖြစ်မယ့် ဇာတ်ကားလေးပါ။ အဓိကသရုပ်ဆောင်တွေကတော့ Lee Min Ho နဲ့ Park Shin Hye ပါ။ ဒီဇာတ်ကားလေးက မင်းသားတွေလည်း တော်တော်များများပါဝင်ပြီး၊ အားလုံးကြိုက်ခဲ့ကြတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေးပါ။ ဒီဇာတ်ကားလေးထဲမှာတော့ Park Hyung Sik ကို ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပုံစံလေးနဲ့ မြင်တွေ့ကြရမှာပါ။
6. Nine: Nine Time Travels
ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ (၂၀၁၃) မှာ ထွက်ရှိထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲလေးပါ။ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲလေးမှာတော့ Park Hyung Sik လည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲလေးက အပိုင်း (၂၀) ပါဝင်တဲ့ Romance, Time travel, Mystery ဇာတ်လမ်းလေးပါ။
7. Foolish Mom (Dummy Mommy)
ဒီဇာတ်လမ်းတွဲလေးက (၂၀၁၂) မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲလေးပါ။ ဒီဇာတ်လမ်းလေးထဲမှာတော့ Park Hyung Sik နဲ့ တခြားသရုပ်ဆောင်တွေများစွာ ပါဝင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲလေးပါ။
ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ Park Hyung Sik ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေး တစ်ခုပါ။
9. Persevere, Goo Hae Ra
ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ အပိုင်း (၁၂) ပိုင်းပဲပါတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲလေးပါ။ ဒီဇာတ်ကားထဲမှာတော့ သရုပ်ဆောင်တွေအများကြီး ပါဝင်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းတွဲလေးမှာတော့ Park Hyung Sik က အပိုင်း (၉) မှာပဲ ပါဝင်တာပါ။
ချစ်သူ ရွှေထူးနေမကောင်းဖြစ်လို့ ပျာယာခတ်နေတဲ့ ရွှေမှုံရတီ
သရုပ်ဆောင်နေတာကိုမသိဘဲ မြေပေါ်လဲကျနေသူကို ကူညီနှစ်သိမ့်ဖို့ရောက်လာတဲ့ ချစ်စရာခွေးလေး
အနောက်တိုင်းသူ မဟုတ်တဲ့ Asia’a Next Top Model မှ ဒိုင် Cindy Bishop